Budata Pets Unleashed APK maka Android
Budata Pets Unleashed
Budata Pets Unleashed,
Anụ ụlọ Unleashed na-ezute anyị dị ka egwuregwu mbibi ụdị ama ama.
Egwuregwu a, nke gụnyere agwa anụmanụ mara mma sitere na Ndụ Nzuzo nke anụ ụlọ, kacha mma maka ndị hụrụ Candy Crush nanya. Nime anụ ụlọ Unleashed, nke EA na Illumination Entertainment mepụtara, ị na-edozi ụdị ndị dị mkpa ma gbawaa ha, dị ka egwuregwu kpochapụwo nke ụdị a, wee gbalịa nweta akara kachasị elu.
Ndị enyi anụmanụ anyị na-eso gị nazụ mgbe ị na-egwu egwuregwu ahụ, ọ bụghị ịkọ egwuregwu a. Mgbe ị gafechara isiakwụkwọ ọhụrụ ọ bụla, ị ga-emepe isiakwụkwọ ọhụrụ na New York, ị ga-enwetakwa enyi anụmanụ ọhụrụ. Notu oge ahụ, ị ​​na-enweta onyinye kwa ụbọchị, ị nwere ike igwu obere egwuregwu na egwuregwu ahụ.
Pets Unleashed Ụdịdị